गर्मीमा राति निद्रा लाग्दैन ? यी खानेकुरा खानुस् ! – Butwal 24 News
September 13, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on गर्मीमा राति निद्रा लाग्दैन ? यी खानेकुरा खानुस् !
गर्मीको मौसममा धेरै मानिसलाई भोक नलाग्ने र निद्रा नआउने समस्याले सताउँछ । गलत खानपान पनि यसको कारण हुन सक्छ । पोषणयुक्त आहारको कमीले पाचन प्रक्रियामा गडबडी आउँछ अनि यही कारण निद्रा बिग्रिन्छ ।
भिटामिन, मिनरल्स तथा अन्य पोषक तत्त्वले भरपूर खाना नै खानुपर्छ सधैं । बाहिरको खानेकुरा सकेसम्म नखानुस् । अनि राम्रो निद्राका लागि तल उल्लेख गरिएका खानेकुुरा खानुस् ।फर्सी